दुम्ला आ’क्र’मणको त्यो दिन, सुत्केरी महिलालाई समेत गरियो ब’ला’त्कार (भिडियो) - Prateek Nepal
दश वर्षे ज’नयु’द्द सम्झिदा अझै पनि क’हाली लाग्दछ । माओवादी ज’नआ’न्दोलनको बेला करिब १७-१८ हजार नेपालीहरुको ज्या’न गएको थियो । लाखौ अं’गभं’ग भएका थिए । त्यसै गरि अझै पनि हजारौ बे’पत्ताको सुचिमा छन ।
माओबादी ज’नयु’द्दमा सहभागी एक व्यक्ति आफ्नो विगत सम्झदै मिडियामा आएका छन । उनि हुन् तत्कालिन माओबादीका ज’नमुक्ति सेनाका प्ला”टुन क’मान्डर बलराम बिक ‘हिक्मत’ । उनले नेपालको स्वर्णिम भविष्यको सपना बोकेर माओबादीमा लागे । तर हाल उनि आफ्नै गाउमा पुस्तेनी पेसा आरन चलाउने र खेति किसानीमा नै रमाईरहेका छन ।
सुरुमा ब’न्दु’क चलाउन पाइन्छ भनेर ज’नमु’क्ति सेनामा लागेका बलराम क’हाली लाग्दो यु’द्द सम्म ल’ड्नु पर्यो । तर उनको मुख्य ड्युटी भने माओबादीका नेताहरुको अंगरक्षकको रुपमा हुन्थ्यो । उनले प्रचण्ड, मोहन बैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई आदि उच्च नेतृत्वको सुरक्षा गरेका छन । तर अहिले ति नेताहरुले हामीलाई चिन्दा पनि चिन्दैनन भनेर उनि आफ्नो असन्तुष्टि जनाउछन ।
उनि ज’नमु’क्ति सेनामा रहदा दु’म्ला आ’क्र’मणको त्यो दिन सम्झिदै भन्छन – ‘दु’म्ला आ’क्र’मणमा आफ्नो धेरै साथीहरुको मृ’त्यु भयो, मेरै आँखा अगाडी साथीहरु ढ’लेको देख्दा अझै दुख लाग्छ ।’ त्यो समय दुई दिन सम्म पनि खाना नखाएको भन्दै उनि भन्छन -‘दुई दिन खाना नखादा पनि मान्छे बाचिँदो रहेछ भन्ने त्यहि बेला थाहा पाए ।’
५८ सालको सं’क’टका’लमा रोल्पा रुकुममा सेना र प्रहरीहरुले गरेको ज्या’दती सुनाउदै बिक भन्छन – ‘गाउमा आएका सेना र प्रहरीले माओबादी भन्दै गाउलेहरुको बाख्रा का’टेर खाने, महिलाहरुलाई ब’ला’त्कार गर्ने गर्थे ।’ सं’कटका’लमा सुत्केरी महिलालाइ समेत राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीले ब’ला’त्कार गरेको कहानी उनि सुनाउछन ।
बलराम बिकसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस ।
नेपाली जनताक लागी खुशीको खबर ! प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घिसिङलाई निरन्तरता दिने
काठमाडौंमा को’रोनाको उच्च जो’खिम, सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह !
काठमाडौँ उपत्यकामा आज भेटिए अहिले सम्मकै बढी को’रोना सं’क्रमित ! चौतर्फी त’नाव बढ्यो